Odisha Weekend Getaways | Tanjona tsara indrindra amin'ny fitsidihana amin'ny faran'ny herinandro
Sarotra foana ny mamolavola fitsangantsanganana indrindra rehefa miasa ny 9 amin'ny 5 amin'ny faran'ny herinandro. Ary ahoana ny amin'ny faran'ny herinandro? Misy ny faran'ny 52 faran'ny herinandro. Ahoana no handoavanao azy ireo? Olona marobe izay mikorontana lavitra ny fandehanana any amin'ny faritra izay eritreretin'izy ireo fa tsy manam-potoana handehanana any amin'ny toeran-kafa, na any amin'ny foiben'ny fividianana na trano fijerena horonantsary. Na ahoana na ahoana, tsy izany no fomba fiaina tsara indrindra! Ny fomba tsotra indrindra hanatsarana ny faran'ny herinandro dia amin'ny fandehanana fiara mandeha mankany Odisha Weekend miaraka amin'ireo Sand Pebbles Tours.
Ny tena izy dia tsy midika fa mila manidina kilaometatra maro ianao mba hahatongavana any amin'ny toerana misy anao. Indraindray ny zavatra rehetra ilainao dia faran'ny herinandro ary fiara iray feno tanky solika.
Ny fonosam-pandehanan-tsarimihetsika goavana mahasarika ny fizahan-tany mahavariana faran'ny herinandron'ny fitsangatsanganana dia nanjary lozabe teo amin'ireo vahiny mpizahatany sy vahiny. Ny tantaram-boky dia mitaky ny tombontsoa isan-karazany amin'ny faran'ny herinandro izay nanome alalana ny Sand Pebbles mba hahatonga ny fametahana amam-pihetseham-po be loatra ary koa nahazo an-dahatsary mahavelona ho an'ny fikambanana ary ho an'ny tsy fivadihana sy fankasitrahana ny mpanjifa. Araka izany, ireo fonosana nasiana fitakiana lalina dia nahitana an'i Bhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika ary bebe kokoa.
Ny andrana Odisha Weekend dia natao manokana avy amin'ny fitsangatsanganana ara-panahy & fandriampahalemana, fitsangatsanganana tantely, tantaram-pianakaviana sy namana ary fitsidihana eco ho an'ny mpankafy natiora.
Ny trano fandraisam-bahiny sy ny fonosana dia ahitana sakafo maraina any amin'ny foibe fizahan-tany. Ny fiaramanidina maoderina indrindra fiara liana & coaches miaraka amin'ny mpamaky efa za-draharaha sy efa nampiofanina dia ny baikon'ny mpanjifa. Ireo trano fandraisam-bahiny manan-danja sy ny fanamafisam-peo farany dia natao handraisana ireo mpanjifan-tseranam-piofanana any Odisha.
Fitsangatsanganana ara-panahy an'i Odisha